Rakotondrazafy Lalatiana : “Manao fahadisoana politika ny mpitondra” | NewsMada
Rakotondrazafy Lalatiana : “Manao fahadisoana politika ny mpitondra”
Mbola resabe ny amin’ny “Raharaha loholona Lylison”. Fahadisoana politika ataon’ny mpitondra, raha ny fijerin’ny filohan’ny Freedom, Rakotondrazafy Lalatiana.
“Mahita aho hoe fahadisoana politika ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny namoaka didy an-tsokosoko momba ny loholona Lylison”, hoy ny filohan’ny Freedom, Rakotondrazafy Lalatiana, teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, momba ny “Raharaha lolohona Lylison René de Roland“.
Mbola vao niresaka fampitoniana politika ny filohan’ny Repoblika; ankilany, mampiditra am-ponja an’ireo izao tsy mitovy hevitra politika amin’ny fitondram-panjakana. Azo melohina ny fanenjehana atao amin’ny loholona Lylison, araka ny nambarany. Miteny fitoniana politika ny mpitondra, nefa mifanohitra tanteraka amin’izany ny fihetsika atao.
Hafahafa ny fihetsiky ny filohan’ny Antenimierandoholona
“Somary mahagaga ihany ny fihetsiky ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, izay manampahaizana momba ny lalàna mifehy ny ady heloka”, hoy izy. Mivandravandra loatra ny fandrika tiana hovelarina ao anatin’ilay raharaha, tiany hovakina bantsilana.
Miteny ny filohan’ny Antenimierandoholona hoe tsy maintsy ny vatan-tenan’ny loholona Lylison no tonga ary milaza ny adiresy misy azy amin’ny fampiakarana ny raharaha. Na ny adiresin’ny mpisolovava aza, azo atao tsara amin’izany. Toy ny hoe fandrika ve no hatao? Tiana hipoitra ny loholona Lylison; amin’izay, mora ny fisamborana azy.
Melohina dieny mialoha ny loholona Lylison
Mety mitombina izay lazain’ny olona hoe maninona no tsy sahy mipoitra ny loholona Lylison, raha tena tsy nanao ratsy? Nefa efa fantatra mazava ny fanenjehan’ny fitondram-panjakana azy, fa tsy hanana zo hanana raharaham-pitsarana marina sy ara-drariny izy. “Efa meloka dieny mialoha ilay olona. Tsy mbola nisy raharaham-pitsarana akory aza, efa nomelohina: niantso fanaovana tanàna maty, lazaina fa niteraka fanakorontanana”, hoy ihany izy.
Nefa hatramin’izao, tsy misy afa-kanaporofo na iray aza hoe: ny antso tanàna maty nataon’ny loholona Lylison, niteraka tokoa ny hoe fandorana kodiaram-piara teny Ambanidia. Tsy nanakorontana akory izany, fa minitra vitsy no nandravan’ny mpitandro filaminana azy, araka ny fanazavany.